The Lightweights ku dhex jira GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Hyuuga_Neji | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux, Lagu taliyay
Sida faahfaahsan na saaray dulucda yar ee Xfce, KDE y Lxde waxay i siisay fikrad ah inaan bilaabo wax lamid ah dagaalka ka socda deegaanka.
Hagaag, tani ma ahaan doonto sidii 'tan' ayaa kafiican ama wax ah, laakiin waxay noqonaysaa inaan kafiiriyo baahidayda (Waxaan haystaa kombuyuutar waxqabadkiisu aad u hooseeyo). Had iyo jeer waxaa jiri doona doodo ku saabsan deegaanka aan u adeegsaneyno iyo tan ay tahay inaan ka fikirno: maxaan ka rabnaa kumbuyuutarradeenaSi kasta oo ay uxunyihiin, markasta waan kaheli karnaa inta ugu badan, marka waxaan kaliya kaa siinayaa ra'yigayga ku saabsan GNU "Miisaanka Fudud", sidaa darteed waxaan isla markiiba ku bilaabayaa XFCE vs LXDE.
Kulankeygii ugu horreeyay ee lala yeesho XFCE Waxay ahayd qiyaastii 2008 markii aan dhiganayay Jaamacadda Cilmiga Informatics (ICU) halkan Cuba, saaxiibkey ayaa i tusay Xubuntu (qaybinta Ubuntu oo ku saleysan XFCE oo hadda ma xasuusto nooca ay ahayd ama lambarka ay lahayd) kaasoo cunay ilo aad uga yar kan Gnome in aan isticmaali jiray waagaas.
El Lxde Dhinaca kale, waxaan aad u bartay isaga in ka yar 2010, markii ay ii soo bandhigeen a Debian asaga iyo aniga runti waxaan ka baqayay desktop-kan "cusub", oo isna ahaa mid ka ili yar kan aan cuno Gnome Labaduba waa u shaqeynayaan sida ay u fudud yihiin (taasi waa waxa aan raadinayay) maahan inaan kumbuyuutarkeyga aad u buuxiyo, sidaa darteed waan doortay Lxde waana jeclahay ilaa heer ay tahay desktop-ka oo aan hadda ku haysto tayda Debian 6.0.
Marka laga hadlayo muuqaalka, waa inaan qirto in labaduba ay aniga ila muuqdaan marka ugu horeysa, taasi waa, aniga oo aan ku darin qiimaha jaban (saamaynta, animations, iwm) de Beryl ama CompizQaybta ugu fiicanina waxay tahay inaysan u muuqan oo keliya muuqaal quruxsan jaleecada hore laakiin waa kuwo "la aqbali karo." Xaqiiqdii way iska shabahaan inkasta oo ay leeyihiin kala duwanaansho inkasta oo aan qirayo taas Xfce waxay leedahay beel aad uga weyn Lxde.
Halkan waxaan ku aragnaa LXDE:
iyo halkan si XFCE:
Labada midkoodna waxaan ku qaabeyn karnaa wax uun riixida midig ee desktop-keena laakiin sharaf qofkii sharaf mudan. XFCE marka la eego qaabeynta, isagu "wuu ka roon yahay kuwa cusub" marka loo eego Lxde; in waxyaabaha qaarkood ay wax yar ku kacayso in la dhigo "khadka tooska ah". Si tan loo sameeyo waa inaan galno dookha desktop-ka halka, ma garanayo haddii ay tahay inaan waqti badan la qaato laakiin waxaan ogahay in doorbidyada Lxde Way ka yar fudud yihiin kuwa XFCE, waa kuwan sawirradu:
Kuwani waa doorbidyada desktop-ka ee LXDE.
Kuwani waa doorbidyada desktop XFCE
Sidaan horay u iri, Xfce la muujiyey in badan oo dhammaystiran Lxde... xitaa waxay leedahay waxyaabo yar yar oo aan midkoodna ahayn Gnome (aniga ahaan guuleystaha miisaanka dhexe) plaf.
Tusaale ahaan, haddii aan jiirka ka dul dhigno gal kasta oo ka mid ah desktop-ka (sida aad ku arki doonto sawirka) Waxaan heleynaa boodhadh hoos-u-dhig ah oo leh guryaha, taasi waa astaamo lagu garto KDE (Horyaalka culus ee culus) Marka waad arki kartaa waxa aan ka hadlayo halkan waa sawir kale:
Sida maareeyayaasha faylka (maareeyaha faylka) XFCE isticmaalaa thunar, Kuwaas oo ay ku faafaan warkoodu inaysan doonayn inay wax badan hagaajiyaan iyaga oo ka baqaya inay ka cuslaadaan. Dhanka kale Lxde waa inuu PCManFM, kan aan arko xoogaa ka xoog badan sababtoo ah wuxuu leeyahay baarkooda yar iyo xawaaraha uu ku jiro awgood (hehe sida fudud ee aan ugu tegayo uurjiifka), Si kastaba ha noqotee thunar awood u leh xitaa qaadashada Sawiro yar yar (thumbnails) ee fiidiyowyada leh fiilo-kaas oo haddii aan si sax ah u xasuusto- la yiraahdo Thunar-Thumbnailers ama wax la mid ah.
Waxyaabaha kale ee iyaga lagu dhex mari karo waa in la helo ilaha shabakadda, qaybtaan waa inaan ku caddeeyaa tan Debian markii aan hummaagayay (sahaminta) el XFCE si aan u arko waxyaabaha aan haysto, waan kari waayey thunar marin u hel ilaha shabakada ... laakiin aniga ayaa qaadaya masuuliyada taas tan iyo markii aan qabtay markii aan tijaabinayay Xubuntu 12.04.
Kama hadli doono wax badan oo ku saabsan tifaftireyaasha qoraalka, XFCE waa inuu Mousepad y Lxde a Buug-yaraha, iyo sida laga soo xigtay lammaane ka mid ah GUTL Mar baan sharxay in mid laga sameeyay midka kale, laakiin hadda way i dilaan mana xasuusto haddii Mousepad ayaa laga sameeyay Buug-yaraha ama ka hor.
Nidaam kasta oo hawlgal waxaa jira barnaamij mas'uul ka ah "sawir" iyo ka shaqeynta daaqadaha, waana had iyo jeer way wanaagsan tahay in la aqoonsado in qaarkood ay ka dheereeyaan kuwa kale, tusaale ahaan "Midnimada" Ubuntu waxay ka gaabisaa Gnome-Shell, laakiin haddii aan ka hadal miisaaniyadaha miisaanka fudud markaa waa inaan tixraacnaa Maareeyayaasha Daaqadaha fudud.
XFCE isticmaal maareeyaha daaqadaha la yiraahdo xfwm y Lxde USA FurBox (dadka isticmaala qaarkood waxay isticmaalaan Flubox sidoo kale) taas oo ah codsi adag oo maxaa diidaya?…, sidoo kale waxyar buu duugoobay, intaa ka sokow in uusan ku imaanin mashruuc ahaan Lxde; laakiin iyadu waxay leedahay iyadu xawaaraha weyn ee lagu fuliyo iyo kharashka yar ee kheyraadka.
Nooca 4.X ee XFCE Waa kan ugu hadda socda ee xfwm haa waa qeyb ka mid ah mashruuca XFCE, waxaa laga yaabaa inaysan aheyn sida ugu dhakhsaha badan Furo furan laakiin waxay keeneysaa xulashooyin badan oo qaabeyn ah (oo ah qalab lagu daray XFCE oo aad ugu eg Gconf-Tifatiraha Gnome). Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada waxa ay u eg yihiin maareeyayaashooda qaabeynta:
Maamulaha daaqada XFCE
In kasta oo ay ahayd Lxde desktop-ka aan hadda isticmaalo oo aan ku haysto codsiyo badan xilligan, waxaan ku dhiiran lahaa in aan taas caddeeyo XFCE waxaa loo qaadan karaa inuu yahay miisaska ugu fudud miisaanka culus.
Tan waxaan u maleynayaa inay sabab u tahay inuu inbadan nala joogay xiriirkiisa Lxde, taas oo ah mid ugub ah marka loo eego. XFCE aad ayey uga dhakhso badan tahay inta badan desktops-yada kale Gnome y KDE laakiin waxaa jiri kara isticmaaleyaal (sideyda oo kale) kuwaas oo doorbida desktop fudud oo ku shaqeeya shil ka dhakhso badan XFCE (waa shaashad kaliya iyo kombiyuutarrada qaar isbeddelka lama ogaan karo), sidaas Lxde waa ikhtiyaarka ay raadinayaan.
Waxaa jira wax aniga i dhiba Lxde maadaama aysan wax walba fiicnayn, waana qayb ka mid ah gujinta midig ee gunta hoose ee soo saaraysa menu aad uga weyn waxa aan jeclahay, marar badanna way iska shabbahaan oo xitaa waxaad ku lumaysaa xulashooyinka. Sikastaba XFCE waa aniga (iyo isticmaaleyaal kale oo badan) desktop ka dhameystiran Lxde in waqtiga laga gudbo loo qoondeeyay inuu noqdo bedelka XFCE (iyo dadka isticmaala jiirka i cafi).
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan labadan miis waxaad ka heli kartaa boggooda rasmiga ah:
Hadda…. garsoorayaasha waa adiga ee bilow inaad dhiibato fikradaada 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » The Lightweights ku dhex jira GNU / Linux
Tusaale ahaan, haddii aan jiirka ka dul dhigno galka kumbuyuutarka (sida aad ku arki doontid sawirka) waxaan helaynaa boodhadh hoos-u-dhig ah oo leh guryaha
Tan ku jirta Xfce 4.10 aad ayey ugafiican tahay, maxaa yeelay haddii ay sawir tahay waxay ku tusaysaa xitaa thumbnail, oo ay weheliso sifooyinkeeda.
Thunar waxay xitaa awood u leedahay inay ka qaadato Thumbnails (thumbnails) fiidiyowyo leh shey - kaas oo haddii aan si sax ah u xasuusto- loo yaqaan Thunar-Thumbnailers ama wax la mid ah.
Thunar wuu awoodaa inuu tan ku sameeyo Tumbler gadaashiisa 😀
Waxyaabaha kale ee lagu samayn karo iyaga ayaa ah helitaanka ilaha shabakadda, qaybtaan waa inaan ku caddeeyaa Debian-kayga markii aan taabanayay (sahaminta) XFCE si aan u arko waxyaabaha ay haysatay, ma aanan helin Thunar si aan u helo ilaha shabakadda. ... laakiin masuuliyadaas ayaan qaadayaa tan iyo markii aan sameeyay markii aan tijaabinayay Xubuntu 12.04.
Xirmooyinka qaarkood waa in lagu rakibaa si tan loo gaaro. Tusaale ahaan, si loo helo sftp Thunar, waa inaad rakibtaa:
Qoraal wanaagsan .. !!!
Maqaal wanaagsan ^^
LXDE waxay isticmaashaa OpenBox (dadka isticmaala qaarkood waxay isticmaalaan Flubox sidoo kale)
Waxaan la yaabanahay yaa leh sidan oo kale? : p
Hahaha .. Waan ogahay, i weydii, i weydii meeee !!!
Waa hagaag, yaa leh sidan oo kale?
Yo soy Waxay yihiin Link, kaliya "hackKoontada Manuel (lambarka sirta ah ee heck wuxuu ahaa "Waan jeclahay Hello Kitty").
Hada ii sheeg, yaa leh sidan oo kale?
Manuel wuxuu joojiyaa daroogada adeer XD.
Anigu waxaan ahay kan sidan u leh.
Thanks to Anonymous Waxaan dib u helay koontadayda, oo waxaan rabaa inaan sheego Waxay yihiin Link ha u kicin been sida aan jeclahay Hello Kitty; dhadhankeyga runta ah waa rag badan yahay, sida The Fairly Oddparents. 😀
Anigu waxaan ahay isticmaale ruug-caddaa ah oo isticmaala lxde, waana inaan idhaahdaa haddii aad jeceshahay inaad daalacato, waxaad heli kartaa lxde leh joogitaan aad uga casrisan marka loo eego shaashadaha caadiga ah ee ka tirsan lxde cusub oo la rakibay (badhanno fidsan, midab guddi iyo madmadow ( dhaqankiisa adigu sidoo kale waad habeyn kartaa), mawduucyada Openbox, habdhaqanka daaqadaha ... xulashooyin badan.In hal dhinac hoos loo dhigo, in la yidhaa bilowga barnaamijka lxde (Alt + F2) waa mid aad u foolxun oo aad ayey uga wanaagsan tahay "dmenu" taas oo waliba Cajiib ah.
Deegaanka ugu yar ee shakhsiga ah: Archlinux + Openbox + dmenu iyo midwalba oo wata xirmooyinkiisa 😉
Salaan dhamaan dildilaaca!
Qoraal wanaagsan! Waxay i siineysaa caawinaad dheeri ah oo ku saabsan xaaladdeyda jirtey ... Waxaan hayaa HP mini 2133 oo aan ku rakibayo Ubuntu 12.04 oo leh Unity 2d (runti waxaan ku sameeyey fikradda "hadda") Laakiin illaa iyo hadda si fiican ayey aniga ila shaqaysay oo waxaan dareemay raaxo, Maikel Llamaret (ku dhowaad dhammaan maamullada halkan jooga waa inay ogaadaan) waxay igu taliyeen inaan rakibo beddelka 12.04 sidaa darteedna aan dhigo mid ka mid ah miisaanka iftiinka dushiisa. Runtii kama aanan sameynin waqti la'aan darteed ... iyo sababtoo ah weli ma aanan go'aansan midka labada ah. Laakiin waxaan u maleynayaa inaan booqan doono XFCE.
PS (And sorry Offtopic): Neji, maxaad ka qalin jabisay ??? Maxay ahayd sheygaagii Dota ama WoW ??? Niikadaadu way i taqaanaa.
Haha haa, runti waxaan ka imid qalin jabinta 4aad iyo naaneysteyda waxaad ku aragtay isku mid Bnet oo ciyaaraya DOTA intii aan ku ciyaari lahaa WoW ee kumbuyuutaro badan oo halkaas ku yaal (in kasta oo WoW aad adiguba ii aragtay Aeon a Draenei / Troll Shaman marka laga reebo Neji oo wuxuu ahaa Rogue) laakiin balooggan kama hadlayo ciyaaraha Blizzard waxaan halkaan u joognaa GNU / Linux haddii aad jeceshahay sida mini-gaagu ula muuqdo Ubuntu, sug inaad ku aragto Xubuntu ama Lubuntu (oo leh Xfce ama LXDE).
Waad u xiisay Xmonad, iyo E17 oo lagu daray mashruucii Pantheon, waxaan kugu sugayaa qoraal kale. Waxaan kasoo dhaqaaqay gnome 2 ilaa Mate kadibna XFCE oo heysata ATi aan la jaan qaadi karin Mutter / Muffin.
Solus OS 2 wuxuu diyaarinayaa Gnome 3 oo leh kala duwanaansho Gnome 2, oo runtii waan isku dayi doonaa.
OS-ka aan ugu jeclahay waa Sabayon 9 XFCE inkasta oo aan hadda isticmaalo inbadan oo ka mid ah "qabow" Xubuntu sida Voyager ah sababta oo ah Sabayon Xorg cusub ma taageerto darawalada lahaanshaha ee ATi 4250.
Waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay, waa inaad fursad siisaa Iftiiminta, taas oo ku jirta heerka ahaanshaha jawiga desktop-ka.
E animations-ka E17 waa qurux badan yihiin barnaamijkooduna waa mid weyn, laakiin wuxuu u baahan yahay mawduucyo dheeri ah si "loogu daydo" codsiyada qt iyo gtk.
Dhawaanna liiskaasi wuxuu ahaan doonaa KDE
Ikey maqal .. waxaan leeyahay .. Ilaahow adaa maqlaa !! hehe ..
Waa kan sawir cusub oo ah LXDE (Lubuntu inuu noqdo mid sax ah), sidaa darteed kuwa arkaya miiskaas markii ugu horreysay ma helayaan sawirka xun: http://fc06.deviantart.net/fs71/f/2012/099/4/1/l12_04_by_comsl-d4vlidb.png
XFCE-na waxaa horeyba u qoray Elav maqaalkii hore (A Debian oo kale, WAAN RABAA !!) ..
Waan cadeeyaa, waxaan ahay EX Acute Versionitis, oo ka imaado Linux Mint KDE, Ultimate Edition, iyo kuwa kale ee 'PseudoDistros' oo kaliya bedelaya gidaarka gidaarka, waxaan bilaabay inaan su'aal galiyo jiritaanka, ilaa «qaangaarka? Wuxuu iga dhigay inaan arko inaan durba ka soo raynayo cudurkan (oo fiican) hehe ..
Hagaag, maqaalkani wuxuu umuuqdaa mid guuleystey. Waxaan aad u isticmaalaa sanduuqa furan oo keligay ah, waxaanan dareemayaa raaxo badan. In kasta oo aan dhammaanteen isku raacsanahay inay tahay isugeyn, waxoogaa halkan ka socda, in yarna halkaas ka imanaya Hadda, waxaan rabaa inaan ku daro in jawi aad u fudud sidoo kale la la'yahay. Waxaan ula jeedaa, sida maareeyayaal badan oo WM ah, iyo deegaanno waxay ila tahay inay halkaas ku dhammaato.
Hagaag, waxaan kahelayaa deegaanadan desktop-ka ah kuwo aad uxiiso badan, waan isticmaalay laakiin kuma habeeyaan dhadhankeyga, laakiin isticmaale kasta oo jecel iyaga ayaa noqon kara mid waxtar badan Si kastaba ha noqotee, maanta waa GNOME dhalashadiisa 15aad http://www.happybirthdaygnome.org/ Waan kula socodsiinayaa haddii aad xiisaynayso inaad wax ka qorto.
Isticmaalaha kale ee LXDE halkan ayuu joogaa, hehe.
Markii Gnome uu u dhaqaaqay laantiisa 3.x, waxaan u galay raadinta fudeyd waxaana marka hore u imid Xfce ka dibna LXDE. Waa run in Xfce uu leeyahay ikhtiyaarro qaabeyn ka badan kan LXDE, laakiin intaas lagu daray maahan bilaash, maadaama ay deegaanka ka sii cusleyneyso culeys badan, taas oo ah barta aan ku raacsanayn nuxurka qoraalkan. Waxaan dhihi lahaa Xfce waa miisaanka dhexe, maahan miisaan fudud. Waxay ahayd muddo ka hor, laakiin maanta xaqiiqadu way ka duwan tahay sidii hore. Dhinaca kale, LXDE waa iftiin; waa wax yar, aad u yar, kana culus kana fudud Openbox. Xaqiiqdii, in muddo ah waxaan isticmaalay Openbox, laakiin maadaama inta kale ee ka mid ah deegaanka LXDE aan wax badan ku kasbaday qiimaha culeys aad u yar, waxaan la joogay LXDE Oo faraxsan.
Waa run waxa Luweeds dhaho, LXDE waxay noqon kartaa mid aad loo habeyn karo dhammeystir qurux badan. Tusaale ahaan, qaabeyn aad u yar waxaad ka heli kartaa wax sida miiskeyga: http://www10.pic-upload.de/14.08.12/u2y8472c1t2.png. Iyo haddii aad jeceshahay dekedda ... maxaad u dartaa mid haddii aad ku dari karto guddi hoose (kaas oo looga tagi karo otomaatiga qarsoon iyo cabirkiisa iyo asalkiisa wax laga beddeli karo) oo ay la socdaan kaliya: http://www10.pic-upload.de/15.08.12/vdrbidel73nj.png.
Waa inaan qiraa, haa, inaan ahay qof jecel minimalism iyo iskudhafyada muhiimka ah, sidaa darteed waxaan fahansanahay in fudeydnimada aan aad u jeclahay dadka kale ay umuuqato wax u dhow xulasho la'aan. Laakiin ugu dambeyntii, taas - adoo adeegsanaya maahmaahda caanka ah ee sida ugu habboon loo maareeyay - dhadhanka, midabada.
Waan isticmaalay labadaba kharashka kheyraadkuna aad bey u egyihiin (isbarbardhiga Xubuntu iyo Debian LXDE) waana sababta aan ugu maleynayo in XFCE loo qaadan karo mid fudud. Meesha aan ka dareemo in LXDE ay qaadato keegga waa iftiinka, fahamka fudeydka sida xawaaraha deegaanka.
Thunar horeyba wuu u sameeyaa iyada oo aan lahayn wax qalab ah oo ku saabsan thumbnails of videos.
"Sikastaba, XFCE waa aniga (iyo kuwa kale oo badan oo adeegsada) desktop ka dhameystiran kan LXDE, kaas oo waqtigi loogu talagalay loogu tala galay inuu noqdo badalka XFCE (oo dadka isticmaala jiirka i cafiya)."
Waan ku saamaxay, laakiin ma fahmin sababta, labadaba waan isku dayay waqti dheer waxaana horeyba ula joogay Xubuntu muddo sanad ah oo aanan ku talagalin inaan beddelo.
Anigu waxaan ka badanahay Xfce, iftiin (aniga ahaan waa ii jiido dhexdhexaad), wax ku ool ah oo dhameystiran waxa aan doonayo.
Midda aniga iga yaabisay qaybinta ayaa ah xubuntu, way fiicantahay, aniga ahaan sida ugu fiican buntus.
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah xfce ugu culus, iyo in ka badan marka loo eego debian Xfce, laakiin waxay kaloo keeneysaa waxyaabo badan.
Xagga Lxde, midka iga yaabiyey waa Rosa Linux's lxde, waxaan u arkaa inay aad u fiican tahay oo ay si wanaagsan u socoto,
aad u fiican boostada !!
Aniga sida aan u jeclahay waa labada deegaan ee ugu fiican Linux desktop, waxaan u isticmaalaa xfce xubinta waxaanan leeyahay desktop ka sokow wax yar oo wax i siiya iyo wax kasta oo aan u baahanahay, waxay umuuqataa mid aad u fiican sababta oo ah qaabka aan u habeyn karo, lxde waa mid aad u fiican sidoo kale fiican, laakiin waxaan u arkaa xfce inbadan la beddeli karo.
Waad salaaman tahay, ma doonayo inaan qalloociyo (wax badan) waan ka faalleeyey iyaga laakiin iyagu iima sheegi doonaan meesha aan ka soo dejisan karo imtixaanka Debian ee leh Xfce? Waan raadinayey, xitaa boggan oo waxaan uun kala kulmay qoraal ka yimid Elav laakiin si aan uga soo rakibo xoqdo waxayna umuuqataa xoogaa inay igu badan yihiin heh! Waxaan ula jeedaa, shaqo yar.
Dhinaca kale, waxaan hadda isticmaalayaa Mint Mate waxaanan haystaa 100 GB oo aan ku rakibo Debian (waxaan ku qaatay 9 bilood oo ma doonayo inaan iska iloobo sidaas oo kale) waxaanan doonayay inaan ku waydiiyo sida loo sameeyo sidaas in -hadday suurta gal tahay- ay wadaagaan isla HD iyo / guri.
Mahadsanid, che. Hadda, ma jiri doonto wax dhibaato ah oo ay iyaga la wadaagaan / guri ama miyaad kugula talinaysaa inaan u qoondeeyo u dhigma / iyo / guriga distro cusub?
/ Isku mid ma noqon karto, guriga waa la wadaagi karaa laakiin waxaa lagu talin lahaa in distoor kasta uu leeyahay mid u gaar ah, maxaa yeelay xusuusnow in qaabeynta halkaas lagu keydiyo oo aad dhibaatooyin la kulmi karto.
Muuqaalada toddobaadlaha ah badanaa lama rakibi karo. Waxaa fiican inaad ku talisid nooca xasilloon.
Dhab ahaantii labadaba, waxaan ugu jeclahay waa Xfce, waxaan dareemayaa wax aad uga fudud kan Lxde.
Waan jeclahay LXDE sifiican XFCE-na waa hubaal ikhtiyaar aad u fiican.
Fariin heer sare ah, labada desktops waa saaxiibtinimo, laakiin hada iyo ilaa iyo inta aan wali socdo ... Weli waxaan u adeegsanayaa MATE, sababaha loo habeyn karo. 🙂
Shaki la'aan isbarbar dhig cadaalad ah inkasta oo xaqiiqda ah inaad isticmaasho LXDE, waxaan ku arkaa XFCE nooc raaxada gnome ah + isticmaalka agab hooseeya…. Maalmahan mashiinka wank ee 2-4GB waxaad arkeysaa inuu ka duulayo KDE, laakiin mid walba dhadhankiisa. , iyo distros, maareeyayaasha daaqadaha, midabada iyo luuqadaha barnaamijka xD
waxay maraysaa ayada oo aan dhihi a
Debian + XFCE iyo Xubuntu meerto ah
Laakiin waan ogahay faa iidooyinka LXDE iyo qalabka nuuca netbook-ka ayaa ah furaha iyo sahlanaanta, gaar ahaan maxaa yeelay waxay umuuqataa superbar-ka daaqadaha XP ka dibna waxay u muuqataa mid ka raaxo badan kuwa cusub.
Ku jawaab miniminiyo
Hadaad rabto fudeyd isticmaal blackbox, on my raspberry-ka waxay aad ugafiicantahay lxde laakiin hadaad rabto bar sare sida Windows XP, KDE, Gnome, isticmaal LXDE dabcan way fududdahay dhinac walba laakiin waxaa jira waqtiyo la mid ah raspberry oo ah waxaad ubaahantahay ka fogow wuxuu kugudarsadaa ilo aad iyo aad ubadan.
Ku jawaab samo
waad salaaman tihiin dhamaantiin waxaan hayaa pentium 4 2.3 mhs oo aan lahayn video core core 3dfx 3000 256 ram disk ah 10 gb waxaan baaraya Linux slitaz 4.0 runtiina lama barbar dhigo midna.
rakibi eeyaha 5. 4. 1 linux oo aad u dhakhso badan qalabkiisuna badan yahay, laakiin kuma aanan qancin slitaz inuu xawaare ku burburiyo oo uusan waxba uga hinaasin deegaanka garaafka, waxaan doonayay inaan rakibo lubuntu oo pc-kayga wuu burburay, xubuntu may ahayn shaqeeya, marka laga reebo ubuntu.haddii qof iga caawin karo inaan rakibo wadayaasha fiidiyowga ee Linux sitaz aad baan u bogaadinayaa maadaama aanan ka ciyaari karin emulator-ka sega ee dhalaalaya shaashadda haddii aan shaashadda dhammaystirona wuxuu burburiyaa pc-ga.
Ku jawaab kone9
Arrin kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan LXDE ayaa ah in OpenBox uu sifiican ula shaqeeyo darawalka gaarka loo leeyahay ee nVidia oo kuu ogolaanaya inaad si buuxda u daawato fiidiyowyada FullHD dhibaato la'aan iyo jawiyada kale waa sida ay tahay fiidiyowyadu, yeynaan dhahdin midnimo ...
Kaliya taas, haddii aad daawato fiidiyowyada ayaa laga door bidaa. Waxaan hadda u isticmaalaa Lubuntu 12.10 oo soo jiidasho leh, madfac.
Linux, aad ayaan u niyad jabay, waxaan u maleynayaa inaan dib ugu laabanayo guindows, waa raaxo, iyo kumanaan codsiyo fudud oo la sameeyo wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. In Linux, codsiyada la mid ah kuwa guul u baahan tahay in la safeeyo. Libreoffice wuu fiican yahay, laakiin Microsoft Office, waxaa ku yaal aalado ka fiican, oo sidaas ayaan ku sii socon karaa. Ceeb. Linux wali waa "ceyriin" ama "adag" in la maareeyo.
Juan Camilo Valencia dijo
"qallafsan"? Dhab ahaan? Ka wanaagsan tag Window $. Waxay kaaga tagayaan wax walboo adiga laguu sameeyay
Jawaab Juan Camilo Valencia
Anigu waxaan ahaa isticmaale debiyaan ah muddo sanad ah, sidoo kale waxaan ka imid khiyaano waxaanan noqday geesinimo waxaanan rakibay debian (inkasta oo ay yiraahdaan waa tan ugu adag in la barto isticmaalka) waxaana dhihi karaa debian iyo Linux distros badan ayaa aad uga badan Nidaamyada hawlgalka ee khiyaanada leh, tusaale ahaan xafiiska aad tidhaahdo waxaan ku dhex ordayaa debian khamri, iyadoo sirta ah waxaad leedahay fayrasyo, shaashado buluug ah, baraf-joog joogto ah oo internetka ah, qallafsan waxay kuxirantahay daqt aad ula jeedo, marka hore way fool xun tahay waa siyaabo badan oo loo habeeyo ...
Ku jawaab cova
qallafsan? ma jiraan codsiyo? wtf. Aduunkee ku nooshahay XD yaa rakibay redhat 1.0 si aad taas udhahdo? maxaad ii sharixi weyday 😛 hahaha
Ma jiraan wax la mid ah Bodhi Linux oo ugu fiican dhammaan
Salaan kadib waxaan haystaa koox aan dhigay ubuntu 13.04 oo aad u gaabis ah, waxaanan isku dayay xfce oo waan hagaajiyay, waxaan cunay 700 mb oo ubuntu ah, conxfce, waxay cuntay 340 mb oo wan. laakiin makinku wuxuu dareemay xoogaa gaabis ah, markaa waxaan rakibay LXDE, waxayna cuni jirtay oo keliya 240 mb oo wan oo qalabkiina xawaare ayuu ku fiicnaaday. Qiyaasta xusuusta ayaa leh barnaamij furan.
Nasiib wanaagse, laptop-kaygu wuxuu leeyahay ilo wanaagsan, ilaa waqtigiina waxaan rabay inaan isku dayo lubuntu, maxaa yeelay faallooyinka ay ka bixiyaan waxa "duulaya" kumbuyuutarka noocaas ah, waan jeclahay laakiin dhib ayaan kala kulmay darawallada sidaa darteed waxaan isku dayay kubuntu, aad u fiican laakiin wali dhib badan buu i siiyay darawallada, anigoo raba inaan isticmaalo kuub oo wax kale ma damin doonaan, marka la soo koobo, waxaan u wareegay xubinta inkasta oo aan si fool xun u eegay jaleecada hore waxaan u habeeyay sidii aan jeclaa, sidoo kale cusub 4.10 asal ahaan waa wax aad u fiican, waan la joogay midkaas, ma jirin dhibaatooyin dheeraad ah, ama kaftan ahaan isku day midnimada
Waxaan isticmaalaa pekwm xD !!
Xakamee isticmaalka baaxadda ee Linux